China RXY Series Saa-Sterilaiz-Jupụta-Akara Line Manufacturer na Supplier | Shinva
Nkọwa nkọwa vial: 1ml-100ml
Mmepụta ikike: 10-500 vials / minute
Na-ejuputa ihe ziri ezi: ≤ ± 1%
Ultrasonic saa + Mmiri-Ikuku nwetụ ịsa
Dị nke ihe ndị bụ isi: SIEMENS, GEMU, FESTO, ABB, Schneider, wdg.
Njirimara Perrụ Ọrụ Kachasị
* A na-eji Ntanetị Vial Wash-Dry-Deill-Seal Production Line saa ahụ, nwoke ịga ụlọ ọgwụ, mejupụta na ịdechi obere vial injection na ogbako. Ọ na atụmatụ elu imewe, ezi uche Ọdịdị, elu ogo akpaaka, mụ na a pụrụ ịdabere na ọrụ, elu mmepụta arụmọrụ na n'ibu na ọkụ mwekota. Akụkụ akpọtụrụ ya na mmiri ọgwụ na-eme nke AISI316L na nke ọzọ bụ nke AISI304. Ihe eji eme ihe enweghi mmetuta na ogwu. Nzube na n'ichepụta ihe kwekọrọ na FDA na GMP ọhụrụ.
* Vial Saa-Akọrọ-Jupụta-Akara Production Line mejupụtara Vetikal Ultrasonic Washingsa Machine, Ihicha na nwoke ịga ụlọ ọgwụ Ikwupụta, na Vial Jupụta-Akara Machine. Ọ na-ahụ maka mmekorita mmekorita, usoro ịgba ọsọ ọsọ na njikwa ziri ezi ma nwee ike izute usoro usoro mmepụta.
* Ọ na atụmatụ elu mmepụta ọsọ, elu iru eru ọnụego, ọ dịghị mmetụta, ọ dịghị ihe ọjọọ edinam, dịghị squeezing na na gbajiri agbaji vials.
* A kwadebere ya na ngwaọrụ nchekwa dị iche iche iji hụ na nchekwa nke onye ọrụ na igwe.
* E debere ọdụ ụgbọ mmiri na akụkụ ndị dị mkpa.
* Ọ na atụmatụ PLC akara, ihuenyo mmetụ arụ ọrụ na kenyere mmepụta.
* A na-etinye ngwaọrụ ndị na-echekwa na njikọ njikọ n'etiti mpaghara atọ nke usoro mmepụta, si otú a nwee ike ịkwado ọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
* Ọ nwere ọrụ nke enweghị kalama enweghị nju.
* Ọ nwere centralized mmanụ ọkọnọ usoro nke nwere ike mfe tinye mmanụ na mmanu ihe.
Ogige SHINVA C
Nke gara aga: Akpaghị aka tree ụgbọelu Ultrasonic Washers
Osote: XH507 Ime Otu
LM Series Ifriizi draya
GV Series akpaaka usoro